भारतमा कोभिड–१९ महामारीबीच गङ्गा नदी किनारामा बालुवाले छोपछाप पारिएका शवहरु बग्रेल्ती फेला - Aasha News
भारतमा कोभिड–१९ महामारीबीच गङ्गा नदी किनारामा बालुवाले छोपछाप पारिएका शवहरु बग्रेल्ती फेला
Prakash Adhikari May 16, 2021
प्रयागराज, भारत, २ जेठ (रासस/एपी) । भारतको उत्तर प्रदेशका प्रहरीहरु अहिले गङ्गा नदीका किनारामा बालुवाले अलिअलि छोपछाप पारिएका शवको अनुसन्धान गर्न खटिएको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिलाई गङ्गाका तटमा जथाभावी छाडिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरहरु पोस्ट भएपछि प्रहरीले अहिले सक्रियता बढाएको हो ।
जीप र डुङ्गाबाट गस्ती गरिरहेका प्रहरीले लाउडस्पिकरको सहायताले नदीमा जथाभावी शव नफाल्न र नदी किनारामा अव्यवस्थित रुपमा शव नछाड्न आममानिसहरुलाई अनुरोध गर्न थालेका छन् । प्रहरीले लाउडस्पिकरबाट भनिरहेको थियो, “हामी तपाइँलाई अन्तिम संस्कारका लागि मद्दत गर्न यहाँ आएका हौं ।”
शुक्रबार, वर्षाले उत्तर प्रदेश राज्यको प्रयागराज शहरको गङ्गा नदी किनारमा बालुवाले छोपछाप पारेका शव बेरिएका कपडा निकालिदिएको थियो ।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकारका प्रवक्ता नवनीत सेहगलले आइतबार स्थानीय सञ्चार माध्यममा छापिएका समाचारको खण्डन गर्नु भएको थियो । समाचारमा कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका एक हजारभन्दा बढी शव विगत दुई सातामा गङ्गा नदी किनारामा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको उल्लेख थियो । तर सेहगलले दाबीका साथ भन्नुभयो, “यी शव कोभिड–१९ बाट पीडित व्यक्तिका होइनन् ।”
उहाँले केही मानिसले हिन्दु परम्परा अनुसार गर्नुपर्ने आफ्ना मृतक परिवारजनको दाहसंस्कार यसपटक विभिन्न कारणले विधिपूर्वक नगरेको बताउनुभयो ।
एक जना वरिष्ट प्रहरी अधिकृत के.पी. सिंहले कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएकाहरुको दाहसंस्कारका लागि प्रयागराजको नदी किनारामा अलग्ग ठाउँको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । कसैलाई पनि नदीको सामुन्ने दाहसंस्कार गर्नबाट रोकिएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रचार गरिएजस्तो नभई नदी किनारामा सानो संख्यामा शव भेटिएका बताउनुभयो, तर उहाँले वास्तविक संख्या दिन इन्कार गर्नुभयो ।
दाहसंस्कारका कार्यमा मद्दत गरिरहेको समाजसेवी संस्था बोन्धु महल समितिका सदस्य रमेश कुमार सिंहले ग्रामीण इलाकामा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या निकै ठूलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले दाहसंस्कारको काममा बढी खर्च र काठको अभावका कारण धेरै गरिब परिवारले आफ्ना आफन्तजनलाई नदी किनारामा त्यतिकै गाडिदिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
हालका दिनहरुमा दाहसंस्कारका लागि तीन गुणा मूल्य बढेको छ अर्थात् एक शवको व्यवस्थापनका लागि भारु १५ हजारसम्म पर्न थालेको छ ।
राज्यका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले गत साता गङ्गा नदीले छेउ लगाएका ७१ शव फेला पारेका थिए । अधिकारीहरुले ती शवको पोस्टमर्टम गरेका थिए तर शवहरु सडिसकेकाले मृत्युको ठोस कारण ठम्याउन सकेका थिएनन् ।
उत्तर प्रदेशकै राजधानी लखनऊबाट करिब ४० किलोमिटर दक्षिणको उन्नाउ जिल्लास्थित गङ्गा नदी तटमा बालुवाले छोपेको अवस्थामा गत साता एक दर्जन शव फेला परेका थिए । जिल्ला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमारले मृत्युको कारण पहिल्याउन अनुसन्धान जारी रहेको बताउनु भएको छ ।
भारतका दुई ठूला राज्यहरु उत्तर प्रदेश र बिहारमा झण्डै ३५ करोड ८० लाख मानिसको बसोबास छ । यी दुई राज्यहरु अहिले कोभिड–१९ बाट सर्वाधिक प्रभावित देखिएका छन् । तुलनात्मक रुपमा गरिब मानिएका यी दुई प्रदेशका मानिसले आफ्ना आफन्तको उपचारका लागि नजिकका शहर, बजारमा लैजाने गरेका छन् । तर धेरैको बाटोमै मृत्यु भइरहेका खबर निरन्तर आइरहेका छन् ।
केही हप्तादेखि तिब्र गतिमा फैलिएको कोरोनाभाइरस अहिले केही मत्थर हुन लागेको सरकारका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा भि.के. पलले बताउनुभयो ।
भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा विगत २४ घण्टामा भारतमा तीन लाख ११ हजार व्यक्ति कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका उल्लेख छ । यो संख्या अघिल्लो दिनको भन्दा करिब १५ हजारले कमी हो ।
तर मृत्यु दरमा भने कमी आएको छ । विगत २४ घण्टामा भारतमा चार हजार ७७ जनाको कोभिडको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ । योसहित भारतमा कूल मृतकको संख्या दुई लाख ७० हजार २८४ पुगेको छ । कतिपय विज्ञहरुले यो संख्याभन्दा अझ बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्
फिल्म निर्देशक, गीतकार तथा उपन्यासकार चेतन कार्कीको देहावसान
एनआरएन युकेको संयोजनमा बेलायतका नेपाली संघ संस्थाले सय वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गर्ने
के देश गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको हो ?, विपक्षी दलले निकाले यस्तो निष्कर्ष
मनाङको नाचैमा खाद्य सङ्कट ; वर्षाका कारण सबै क्षेत्रबाट सम्पर्क विच्छेद
कोरोना भाइरसबाट २४ घण्टामा ४१ को मृत्यु ; थप ४ हजार ५ सय २२ संक्रमित
कोभ्याक्स अन्तरगत नेपाललाई छिट्टै ९ लाख ४८ अजार मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध हुने ; एक डोज लगाउदा पुग्ने जोनसन एन्ड जोनसन ६ लाख मात्रा आउने
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको अर्को झापड ; प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि नियुक्त ओली सरकारका २० मन्त्री पदमुक्त, ओलीको सरकार टुहुरो बन्यो
अर्थमन्त्रीले सेबोन अध्यक्षको सातो लिएपछि सेयरबजार पुरानै लयमा ; मंगलबार नेप्से परिसूचकमा ७९.४३ अंकको बढोत्तरी, १० अर्ब १३ करोड बढीको कारोबार
मनुसनको सुरुमा नै नेपालका जलविद्युत आयोजनामा बाढी र पहिरोले अर्बौको क्षति तर आपूर्ति सुचारु
मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङ्पाललाई काठमाडौँ महानगरको सहयोग ; मेलम्चीलाई रु २ करोड , पाँचपोखरी र हेलम्बुलाई रु ५०–५० लाख
विश्वासको मतःनेपालको संविधानको पहिलो अभ्यास
दाङमा बढ्दो छ कोरोना सङ्क्रमितको सकस ; मृतकको दाहसंस्कारमा समस्या
जाजरकोटको जलजला पाटनमा हराएका सात गोठाला सकुशल फेला ; प्राथमिक उपचार गरी खाना खुवाइयो
जाजरकोट, ४ आषाढ । जाजरकोटको जलजला पाटनमा गोठ लिएर जाँदा हावाहुरी र पानीमा परेर वेपत्ता भएका सात जना गोठालाहरु भेटिएका छन् । प्रहरी र स्थानीयवासीले उनीहरुलाई भेटाएको प्रहरी नायब […]
Prakash Adhikari June 18, 2021
मेलम्ची,मनाङ, मादी जलविद्युत् आयोजना लगायत देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी तथा पहिरो पीडितको उद्दारमा खटिदै नेपाली सेना
Prakash Adhikari June 17, 2021
विपद् व्यवस्थापनमा सेना परिचालनमा राष्ट्रपतिको घोषणा नचाहिने ! स्वतः परिचालन हुने पूर्वनिर्देशन भइसकेको सेनाको दावी !!
Prakash Adhikari June 16, 2021
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडा अधिक ;कसरादेखि पश्चिमतर्फ ४२९ , पूर्वतर्फ २६५ मात्रै
Prakash Adhikari June 10, 2021
Pokhara, June 21 (RSS): Kaski district authorities have extended prohibitory orders in the district foraweek with some relaxations. According to the new orders coming into effect from Tuesday, […]
Home Minister urges security bodies to involve in COVID-19 control
Multi-Year plan of 11 smart cities approved